Maitiro ekuvandudza PC kuzvitonga muDebian | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuvandudza kuzvimiririra kwePC muDebian
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, Kugoverwa
Sevha simba shoma, kunyanya kana iwe uchitsamira pabhatiri, iwo maitiro akanaka kwazvo. Kuzvitonga kuzere kweiyo nyowani inotakurika kana nharembozha, kunyangwe nguva imwe neimwe painenge ichivandudzika netekinoroji nyowani dzemagetsi uye nekugadzirisa kweanoshanda masisitimu uye software, ichiri kuenderera kuva dambudziko hombe. MuGNU / Linux rave riri dambudziko rinoshamisa riri kugadziriswa zvishoma nezvishoma.
Zvakanaka, muchinyorwa chino, isu tichaedza kuti iwe ugone kuwana mamwe mashandiro kunze kwebhatiri rako uye kuzvimirira, nekudaro kufamba, kuwedzera pane chako kifaa neLinux. Kunyanya isu tichaenda kutsanangura ungazviita sei kubva kuna debian, kunyange ichishandirawo Ubuntu uye zvigadzirwa zvichibva nhanho dzakafanana dzakatsanangurwa apa. Kunyangwe mu kernel uye musimba manejimendi izvo izvi munguva pfupi yapfuura zvinogona kuitwa pasina kuronga ruzivo, tinogona kuita mamwe marongero ekuvandudza iyo.
Iwo manomano aunogona kuita pane yako Debian (kana yaunofarira distro) yekuchengetedza imwe simba ndeiyi:
Dzima WiFi neBluetooth, sezvo izvi zvishandiso zvekushandisa zvichidya kunyangwe zvisiri kushandiswa. Uye kana zvisiri kushandiswa, nechimwe chikonzero chekudzima kubva kumenyu huru (izvi zvinogona kusiyana zvichienderana nedesktop nharaunda yauinayo, asi kubva padanho rekutonga kana bar yemamiriro izvo zvinowanzoitwa).
Kuderera kupenya Izvo zvakakosha kwazvo, kwete chete kuti udzivise kukuvadza maziso ako kana iwe uine iyo yakanyanya kukwirira, asi zvakare kuitira kuti iyo skrini isatore yakawanda magetsi uye inoderedza kushandiswa. Usaise pasi zvakanyanya zvekuti unokanganisa maziso ako nekumanikidza kuti uone zviri pachiratidziro ... Asi iwe unogona kuzviita kubva padanho rekutonga mumatanho esarudzo kana kunyangwe nekubatanidzwa kwemakiyi kana laptop yako iinawo.
Vhara zvese zvinoshandiswa zvausiri kushandisa. Kana iwe uine dhimoni richimhanya uye usiri kurishandisa futi, rega zvakare, kuti vasazove vari kushandisa zviwanikwa kumashure.
Kana uine SD kana mamwe makadhi, maUSB, nezvimwewo, akaiswa, bvisa, izvi zvinogona kuve zvinobatsira mukushandisa, nekuti izvi zvishandiso zvinoda izvozvi. Kunyangwe mune mamwe ma tutorials zvakare vanoraira kubvisa akaisirwa maCD kana maDVD kana maBD, ini handina chokwadi kana izvi zvichideredza kushandiswa, nekuti dhisiki harisi kumhanya panguva isiri kuverengwa uye iko chete kunwa kunowanzoitwa kuwedzerwa, kana zvisiri Iwe tora kunze, ndipo paunotanga komputa, iyo inotanga kuiverenga, asi yozomira.
Dzivisa kushandisa Adobe Flash zvakare iri sarudzo yakanaka, nekuti iri kumhanya kumashure ichidya. Kunyangwe akawanda mawebhusaiti achiri kuvimba pairi nekushanda kwayo kunyangwe ramangwana iri HTML5 ...
Shandisa browser risingaremi zvakare iri sarudzo yakanaka. Chrome, semuenzaniso, inoshandisa zviwanikwa, kumanikidza bhatiri kudhizaina nekukurumidza. Ive nekuchenjerera, sekurudziro kana kunyange zvakanyanya kushandisa isingaremi desktop desktop kana yakazara isina kurema kugovera!
Tora kushanya kwepaneru yekudzora kana sarudzo dzekumisikidza dze distro yako uye uone iyo magetsi emagetsi hazvina kunyanya kushandura mimwe tsika zvinoenderana nezvatinoda. Semuenzaniso, unogona kuseta otomatiki screen shutdown kana isiri kushandiswa, iyo system yekurara timer, nezvimwe.
Uye ini ndinowedzera njere, sezvo inogona zvakare kutibatsira kuponesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuvandudza kuzvimiririra kwePC muDebian
Mhoro, zita rinofanira kuchinjwa kubva pa "PC" kuenda "rinotakurika".
Pandakafunga zita remusoro, chinhu chekutanga chakauya mupfungwa chaive "chinotakurika", asi ini ndakachinja nekuchinja kuita "PC", nekuti ini handidi kutsanangura nechikonzero chakareruka. Panogara paine kutaura kwekuchengetedza kana iwe uine bhatiri, ndiko kuti, kana isu tine nhare mbozha, muchokwadi chinyorwa ichi chakanangidzirwa icho ... Asi ini handidi kuti iwe ukanganwe kuti mamwe eaya maitiro anogona zvakare kuva inoitwa pamakomputa akabatana nenetiweki, kwete mumalaptop chete, kuchengetedza simba.
Shuwiro yakanakisa. Kutenda kwakanaka, asi kune chikonzero ...
Chikonzero chese icho PC inoti, sezvo kudzikisa simba rekushandisa hakungoshandi kumalaptop chete.
Semuenzaniso, murabhoritari ine akati wandei makomputa akabatana panguva imwe chete, zvinokosheswa kuwana izvo izvi zvinoshandisa simba shoma, nekuti iri shoma mutoro wedunhu remagetsi.
Iyo yaMarch vhezheni yeCentOS 7 yabuda